कसले राख्यो त्रिभुवन विमानस्थलमा ब’म ? अन्तत: भयो यस्तो पुष्टि — Imandarmedia.com
कसले राख्यो त्रिभुवन विमानस्थलमा ब’म ? अन्तत: भयो यस्तो पुष्टि
काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा ब’म नभएको पुष्टि भएको छ । विदेशबाट अज्ञात व्यक्तिले फोन गरेर विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलमा ब’म भएको बताएपछि विमानस्थलमा हंगामा भएको थियो ।
फोन आएसँगै सेनाको ब’म डिस्पोजल टोलीसहितले सर्च गर्दा बम नभएको पुष्टि भएको हो । बुधबार बिहान अज्ञात व्यक्तिले विदेशबाट विमानस्थलको ६ ठाउँमा ब’म भएको भन्दै फोन फोन गरेर भ्रामक सूचना दिएका थिए ।
नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका अधिकारीलाई ल्याण्ड लाइनमा फोन गर्दै आन्तरिक तर्फको टर्मिनलमा ६ ठाउँमा ब’म भएको सूचना दिएको पाइएको त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका एसएसपी भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।
विमान उड्ने बाटो: शको एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अत्यन्त व्यस्त रहन्छ। यो विमानस्थलमा हरेक दिन पाँच सय वटाभन्दा बढी उडान तथा अवतरण हुने गर्छ। हजारौँ यात्रुलाई पाइलटले विमान उडाएर गन्तव्यसम्म पुर्याउँछन् । ती पाइलटलाई कन्ट्रोल रुममा बसेका एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर एटीसीले बाटो देखाउँछन्।